Izifo Eziqhutshwa yi-Eosinophil - Isingeniso -
Ikhaya>Izifo Eziqhutshwa yi-Eosinophil - Isingeniso
Izifo Eziqhutshwa yi-Eosinophil - IsingenisoIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-09-07T17:31:36+02:00
Thayipha 2 Izifo Zokuvuvukala
Izifo Eziqhutshwa Eosinophil (EDDs) Izinhlobo Zesifo Sokuvuvukala Sohlobo 2, ezingathatha izinhlobo ezahlukahlukene. Ama-eosinophil aphakeme adlala indima ebalulekile ku EDDs. Ukungasebenzi komzimba kwe-Eosinophilic kuyisibopho sokuqashwa kanye nokusebenza kwama-eosinophil futhi kungadala lezi zifo.
Kuyimpendulo yesistimu yokungezwani komzimba ngenxa yokusabela okweqile kokuzivikela komzimba, okudala izinkinga ze-asthmatic nezinye izifo. Amasosha omzimba, amaphaphu, isisu / isisu nesikhumba kungathinteka ngezindlela ezihlukile.
Emakhasini amanye, sizoxoxa ngokulandelayo EDDs ngokuningiliziwe:
I-EoE (Eosinophilic Esophagitis)
I-AERD (Aspirin Exacerbated Reflux Disease) noma iSatter's Triad
I-Urticaria Engapheli Yesikhashana
Ividiyo elandelayo yethula i-Eosinophil-Driven Diseases EDD/ Thayipha ukuvuvukala kohlobo 2 kanye nokuhlangana kwalo nesifuba somoya.
(Ngezansi ungafunda umbhalo wevidiyo ngolimi lwakho)
Ingabe ingaphezu kokuthi “Isifuba Somoya Nje”? Ukuqonda imithombo yokuvuvukala okuyisisekelo.
Cabanga ukuthi uyobona udokotela.
Umazi kahle udokotela wakho ngenxa yesifuba somoya, kodwa uyaqaphela ukuthi lapho i-asthma yakho iba yimbi kakhulu, i-eczema yakho iba yimbi kakhulu.
Wena dokotela uphikelela ngenye indlela, kodwa kuthiwani uma uqinisile?
Ukuvuvukala kohlobo lwe-2 kulapho amasosha omzimba eqala ukusebenza ngokweqile, eba nezinkinga zokuphefumula nezinye izifo
Izifo eziningi, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe ku-asthma kanye ne-atopic eczema, kungabhekwa njengezifo zokuvuvukala zohlobo lwe-2.
Yize bexhumene nezifo eziningi ezahlukahlukene, abantu abaningi abazi ngokuvuvukala kohlobo lwesi-2…
… Ngisho nodokotela.
Lokhu kubonakala kahle ngendlela abacwaningi abaqonde ngayo ama-eosinophil, iseli lomzimba elibandakanyeka ekubangeni ukuvuvukala kohlobo lwesi-2.
Ama-Eosinophil ngokwesiko axoshwa kwisayensi yezokwelapha.
Zazihambisana kuphela nezifo ezithile ngokusetshenziswa okumbalwa.
Kepha ucwaningo olusha lulethe ukuguqulwa kwepharadigm ukuphonsela inselelo lokhu kucabanga.
Abaphenyi manje bayaqonda ukuthi banemisebenzi ehlukahlukene emzimbeni wonke.
Babandakanyeka ezifweni zamaphaphu, emathunjini, ezesikhumba kanye nezifo zomzimba, futhi kubalulekile ekwakheni ukuzivikela ezifweni.
Kukhona nocwaningo olukhulayo ngokwelashwa kwezifo zokuvuvukala kohlobo lwesi-2, ngokubhekisa kumaseli omzimba abangela ukuvuvukala kohlobo lwesi-2.
Lapho ososayensi besebenzisa izindlela zokwelashwa ezihlosiwe ukuvimba ukuvuvukala kohlobo lwe-2 lwesifo somoya esibucayi, iziguli zathola nokuthi kusizakala ukwelapha i-atopic eczema kanye nama-polyp acinene.
Konke lokhu kukhombisa ukuthi ukuvuvukala kohlobo lwe-Type 2 okuzihlanganisa kanjani lezi zifo.
Kepha, ngochungechunge lwezifo ezichazwa ngokuxhumeka, abantu abaphila nezifo zokuvuvukala zohlobo lwe-2 bavame ukuzizwa behlukanisiwe ngokuhlangenwe nakho kwezokwelapha kokungaqondani nokungaqondi kahle.
Uma sifunda kabanzi ngokuvuvukala kohlobo lwe-2, singathuthukisa izimpilo zabantu abanezifo ezivuthayo.
Simema zonke izinhlangano zeziguli, ezisebenzayo ku EDD, ukuze uzuze kunethiwekhi yomhlaba jikelele yeGAAPP futhi ube yilungu!